« Previous Next » May 26, 2012 मुख्यमन्त्रीको तौल २० किलो ! जेठ १३ – सरकारी कर्मचारीको लापरवाही कतिसम्म हुँदो रैछ भन्ने कुरा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले भोगेका छन् । गहुँ खरिदमा आफूहरु ठगिएको किसानले गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव आफै निरीक्षणमा निस्किए । जब यादव गहुँ खरिद केन्द्रमा राखिएको ईलेक्ट्रोनिक तराजुमा चढे उनको तौल जम्मा २० किलो मात्रै देखियो । हट्टाकट्टा ३९ वर्षका अखिलेश आफ्नो तौल जम्मा २० किलो मात्रै देखिएपछि रिसले आगो भए । ‘जब मान्छेको तौल नै सही नदेखाउने तराजुले किसानको गहुँको बोराको तौल कति देखाउला ?’ मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे ।
त्यतिमात्रै होईन यादवको चाकडीमा देखिएका खरिद केन्द्रका अधिकारीले किसानबाट निरन्तर गहुँ किनिरहेको र प्रतिक्विन्टल १२ सय ८५ रुपैंया दिएको बताएपछि यादव आफैले किसानसंग यसबारेमा सोधे ।
तर किसानले भाउ पाउने नपाउने कुरा भन्दा अघि गहुँ खरिद नै नभएको र खरिद भएका ठाउँमा पनि ११ सय रुपैंया भन्दा बढी नपाएको गुनासो गरेका थिए । भ्रष्टाचार हटाउने घोषणा गर्दै जनमत बटुलेका यादवले आफ्नै राज्यमा त्यस्ता जनता लुट्ने कर्मचारी भेटेपछि के सोचे होलान् कुन्नी ! प्रतिक्रिया पठाउनुस्